जीवन परिवर्तन नभएको नामधारी ख्रीष्टियन – Word of Truth, Nepal
२ पत्रूस २:२०-२२ -– “किनकि प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको पहिचानद्वारा तिनीहरू संसारका अशुद्धताहरूबाट उम्केका छन्, तर फेरि ती कुराहरूमा फसे, र हारे भने तिनीहरूको पछिल्लो अवस्थाचाहिँ अघिल्लोभन्दा खराब हुन्छ। … तर यस सत्य उखानमुताबिक तिनीहरूलाई भएको छ: “कुकुर फेरि आफ्‍नै छादपट्टि फर्क्यो, र नुहाइएको भुनी फेरि आहाल खेल्न फर्क्यो।”
यस्तो खालको “विश्वास” मा पश्चात्तापको ठाउँ खै? क्रोधबाट भागेर ख्रीष्टकहाँ शरण लिन आउने कुरा खै (हिब्रू ६:१८)? मूर्तिहरूबाट परमेश्वरतर्फ फर्कने कुरा खै (१ थेस्सलोनिकी १:९)? नयाँ सृष्टि हुने कुरा खै (२ कोरिन्थी ५:१७)?
पश्चात्तापको बारेमा पनि अक्सर प्रचार भइरहेको छैन। मुक्ति भित्रबाट शुरु भएर बाहिरसम्म देखिने पवित्र आत्माद्वारा हुने परिवर्तन हो भनी देखाउने काम गरिएको छैन। परमेश्वरका कुराहरूको निम्ति कुनै जोश पैदा नगर्ने किसिमको “विश्वास” सित मानिसहरू सन्तुष्ट छन्। झूटा शिक्षकहरू आउँछन् र बाइबलले धर्मी जीवनको बारेमा धेरै बताएको तथ्य उनीहरूले देखाउँछन्। हुन त तिनीहरूले यस बारेमा ठीकै भनेका हुन्, तर परमेश्वरको सामु मानिसको धर्मीकरणको निम्ति कामहरूको स्थान छ भन्ने कुरामा तिनीहरू बिल्कुल गलत छन्।
मुक्तिको पूर्ण बाइबलीय सन्देश प्रचार गर्नु कति धेरै जरूरी छ—कि पश्चात्ताप र पापहरूको क्षमा उहाँको नाममा हरेक जातिका बीच प्रचार गरिनुपर्छ (लूका २४:४७)। दुवै पक्षहरू सुसमाचारका नभई नहुने पाटाहरू हुन्। वास्तवमा यो हो “पूर्ण सुसमाचार” को माने, न कि पेन्टेकोस्टल अन्यभाषाहरू र ईश्वरीय चङ्गाइ!
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-03-04 14:09:142020-10-25 14:30:04जीवन परिवर्तन नभएको नामधारी ख्रीष्टियन
के तिनीहरूले मुक्ति पाएका छन्...